Kedu ka m ga-esi weghachite Njikwa echekwara?
Windows Echiche ndị dị oke
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na achọrọ m ịnweta nchịkọta nke faịlụ nke m kwadoro?
Ya mere, ị kwadoro data gị niile dị mkpa site na iji ndabere ndabere weebụ ma ugbu a na i wepu faịlụ (ma ọ bụ 1,644 n'ime ha) na mberede, olee otu ị ga-esi emetụ aka na nchekwa gị?
Ị nwere ike ibudata otu site na ebe nrụọrụ weebụ nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ enwere ihe ị chọrọ ime na kọmpụta gị kama?
Ajụjụ na - esonụ bụ otu n'ime ọtụtụ ị ga - ahụ na Ntanetị Ntanetị Online m:
& # 34; Olee otu m ga - esi nweta ozi ndabere site na igwe ojii ọrụ ndabere ma ọ bụrụ na achọrọ m ma ọ bụ ehichapụ ya? & # 34;
Ọtụtụ ọrụ ntanetịime weebụ na-enye ọtụtụ ụzọ iji weghachite data gị kwadoro na mbụ ma ụzọ abụọ kachasị eme ka weebụ weghachite ma weghachite software .
Na weebụ weghachite , ị abanye na ebe nrụọrụ weebụ ndabere gị site na ihe nchọgharị ọ bụla na kọmputa ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ, na-eji aha njirimara na paswọọdụ ị banyere aka. Ozugbo, naanị ịchọrọ, na ibudata, faịlụ (s) ị chọrọ iweghachi.
Weghachite webmaster dị ukwuu mgbe ịkwesịrị iweghachite otu ma ọ bụ karịa faịlụ ma ị nweghị nso kọmputa nke ị kwadoro ha. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịdị njọ mgbe ihe ịchọrọ n'ezie bụ iweghachi faịlụ ahụ na ebe mbụ ya.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị nọ n'ụlọ onye òtù ezinụlọ, ha chọrọ ịhụ ọrụ mweghachi nke Photoshop ị rụrụ na ezughị okè ezinụlọ gị site na narị afọ nke 19 ị nọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ nnukwu faịlụ, na otu ị na-azọpụta ọtụtụ ugboro kwa izu, ya mere idebe ya n'ekwentị gị adịghị eme ọtụtụ echiche. N'ihi na ọrụ ntanetịime igwe gị nwere nhọrọ nchịkwa weebụ , ị nwere ike ịbanye na akaụntụ gị sitere na kọmputa ọ bụla n'ụlọ, budata ya, ma gosi ya.
Site na ngwanrọ weghachite , ị mepee ọrụ ntanetịime nkwado ndabere na kọmputa gị ma were ike weghachite weghachite ịchọta na ibudata faịlụ ahụ ị chọrọ.
Iweghachite Software dị ukwuu mgbe ịchọrọ ịmeghachi otu ma ọ bụ karịa faịlụ na ebe mbụ ha (ọ bụ ezie na ọnọdụ ọhụrụ na-abụkarị nhọrọ).
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-arụ ọrụ na nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ - a nnukwu ederede 40 MB na afọ niile nke ọnụ ahịa ahịa na ya. Maka ihe kpatara ya, ị na-emeghe spreadsheet n'isi ụtụtụ wee merụọ ya! O nweghị ihe ị na-eme yiri ka ọ na-enyere aka. N'ụzọ dị nro, ọrụ nkwado ndabere na mpaghara nke ị kwadobere na-akwado akwụkwọ mpempe akwụkwọ ozugbo ị kwụsịrị ịzọpụta ya n'abalị ahụ. Site na ngwanrọ weghachite , ị na-agbanye ọkụ na ngwanrọ, jikwaa ebe ọ na-echekwa, ma pịa otu bọtịnụ iji weghachite ọrụ ọrụ ahụ.
Ị nwere ike ịhụ otu n'ime ọrụ ndabere nke kachasị amasị m na-enye ohere ntinye ederede nke Desktọpụ (ngwanrọ software) na Web App File Access (web restore) site na ịlele maka atụmatụ ndị dị na Ntọala Mwepụta Ntanetị Online .
Tụkwasị na nke a, ọ fọrọ nke nta niile ọrụ ntanetị ịntanetị na-enye ngwa ngwa, na-enye gị ebe ọ bụla-ịnweta niile nke ndabere data gị. Hụ Ebe ọ bụ na Enwetara M faịlụ na Intanet, Enwere m ike ịnweta ha n'ebe ọ bụla? maka ndị ọzọ na nke a.
Gịnị ma ọ bụrụ na kọmputa gị dum anwụọ ma na ịkwesịrị iweghachi ihe niile ? Hụ Ọ bụrụ na Kọmputa M Kwụchara, Olee Otú M Ga-esi Eweghachite Ejiri M? maka ihe ndị ọzọ na nke ahụ. O di nwute, obughi weghachite weghachite weghachite ma obu weghachite ngwanro bu ihe di nma mgbe obosara isi na komputa komputa, ma obughi maka faịlụ gi niile.
Kedu ihe mere ị ga - eji họrọ atụmatụ dị oke oke ma ọ bụrụ na enweghị ndị ọzọ?
Ọ bụrụ na Kọmputa M Nile Nwụrụ, Olee Otú M Ga - esi Eweghachite faịlụ m?
Kedu ihe nchekwa ọha na Windows?
Ịchọta na Iji Windows 7 Firewall
Atụmatụ isii kachasị na Windows 7
Tọgharịa PC a: Ngwá Ọrụ Ndozi maka Nsogbu Dị Nso
Vista na Windows 7 nke System na Maintenance Area
Kedu ihe bụ Njikwa Ngwaọrụ?
Tupu ịzụta ihe Ultra HD Format Blu-ray Disc Player
10 Nchịkọta Kọmitii Ntugharị Atụmatụ
Ntugharị Flash: Chọpụta Bitmap
Esi meziwanye Kọmputa gi na Windows Vista SP2
LG kpughere ihu igwe OLED kachasị ukwuu n'ụwa
Otu esi enweta Gmail na Outlook 2013 Iji IMAP
Axim Wireless Home Ụlọ ihe nkiri Audio System Profiled
Ihe nkwụnye ego ntanetị kachasị mma
Ebube nke Creed Ihe Mere Russia Atụmatụ na usoro
Ịmepụta égwu maka Apple Watch na watchOS 2
Jiri akwukwo ogugu iPhoto otutu ichikota foto gi
Kedu ihe bụ igwegharị?
Ulo oru kachaa mma nke uwa kacha mma ka ha zuta na 2018
Nhazi nke ngwugwu IP
The 8 Best Thunderbolt 3 na 2 Docks ịzụta na 2018
10 Ọrụ Ntanetị Ịntanetị Ị Ga-ekwenyeghị n'Ezie
Achọrọ M Mpempe Ntanetị Maka Ọrụ M?
Ụlọ ihe nkiri Ụlọ ahịa Ihe ntanetịime - Ịzụta Ozi na Ịzụ Ntanetị
Iji iPad Obere maka GPS Gbanwee Nsoro Ụgbọala
Esi edezi faịlụ ndị dị na Windows
ASUS ZenBook 3: Ike na obere ngwugwu
Ego Ole Ka M Twitter Kwesịrị Ekwesị?